GRM Yemukati Yemapuratifomu Mapuratifomu: Kuunza Njere kune Yako Bhizinesi Maitiro | Martech Zone
GRM Yemukati Yemapuratifomu Platform: Kuunza Njere kune Yako Bhizinesi Maitiro
Chishanu, Mbudzi 2, 2018 Douglas Karr
Enterprise Zvemukati manejimendi Management (ECM) mapuratifomu anoenderera mberi kufambisira mberi zvipo zvavo, kwete kungova zvinyorwa zvinyorwa, asi kunyatso kupa huchenjeri hwebhizimusi maitiro. GRM's Content Services Platform (CSP) inopfuura gwaro manejimendi manejimendi. Ndiyo mhinduro panogona kugadzirwa zvinyorwa zvinogoverwa uyezve bhizimusi rekufambiswa kwemabasa rinogona kukwidziridzwa. GRM's CSP inobvumira a zvemukati manejimendi system (CMS) kubatanidza data analytics, kudzidza kwemuchina, kungwara kwedata kutora, uye DMS software yekugadzirisa zvinyorwa, vhezheni yekutevera, epamusoro-tech chengetedzo maficha, intuitive business process management (BPM) uye Workflow Management Software (WMS).
Ndiwo mazhinji mavara matatu-mavara!
Zvimiro zveGMM's Content Services Platform inosanganisira:
Gadzira uye Gadzirisa Maitiro - Mazuva ese bhizinesi mabasa sekutenga odha kana mabhaisikopo kugadzirisa anowanzo kuve echinyorwa, anowanzo kunonoka uye zvikanganiso, uye anowanzo gadzira matambudziko akakura kana abviswa. Nebasa reGMM remukati, unogona nyore kugadzirisa uye kugadzirisa matanho akadaro. Yedu CSP inoteedzera zviitiko zvese zvevashandisi uye zvinyorwa zvekudzokororwa sezvo ivo vachibatanidzwa pane chaiyo-nguva, uye zvine mutsindo zvinowedzera kufambira mberi kusvika pakupedzisa kwakakosha mabasa.
Enterprise Zvemukati Management Sisitimu - yavo yemukati masevhisi chikuva ndeye AI-inotyairwa bhizinesi zvemukati manejimendi manejimendi inoburitsa uye kugadzirisa isina kugadziriswa data, kunyangwe kubva kumagariro masisitimu, uye inovandudza maitiro ebhizinesi. Isu tapfuura masiginecha emagetsi. Iyo CSP yakagadzirirwa kuenderera nekukwenenzvera kwemaitiro ebhizinesi uye pa-iyo-kuenda kuenda, kunyangwe pane nhare mbozha.
Gwaro Hupenyu utariri - GRM inopa yese suite yemagwaro manejimendi masevhisi ayo anogona kutakura uye kushandura mapepa mapepa kuva magwaro edigital, kubvisa data, kupatsanura marekodhi, uye kuita kuti vagadzirire kubatanidzwa pane ako maitiro ebhizinesi rekambani yako. Izvo zvaimbotora maawa zvino zvaitwa mumasekondi. Ipo iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingeita.
GRM yakasimba, yegore-yakavakirwa zvemukati zvemapuratifomu (CSP) inogumbuka uye inodedera sisitimu inoumbwa neseti yezvishandiso uye kugona kunobatsira mabhizinesi kutora kutonga kwavo data - kuronga nekuishandisa nenzira kwayo uye zvinobudirira. Pakati peavo kugona ndeyeActionable Analytics, yekufungidzira analytics basa iro rinopa chaiyo-nguva nzwisiso kuitira kuti vashandisi vagone kuona izvo zvingangoitika nyaya nemikana, vozvibata zvine hungwaru.
GRM Ruzivo manejimendi iri rinotungamira rekupa manejimendi manejimendi manejimendi. GRM yakasimba, yegore-yakavakirwa zvemukati masevhisi chikuva inoshanda senge yepakati peiyo mhinduro yedhijitari iyo GRM inopa vatengi vayo. Inoshandira hwaro hwakasiyana-siyana hwemaindasitiri senge hutano hwehutano, hurumende, zvemutemo, mari uye zviwanikwa zvevanhu, GRM inoendesa vatengi vayo masevhisi akadai sekushandurwa kwedhijitari, epamberi dhata rekutora mhinduro, gwaro manejimendi masystem, workflow otomatiki, nhoroondo yedhata yekuchengeta, kutevedza uye hutongi, bhizinesi. process management uye epamberi analytics kugona, pamwe izere suite yekuchengetedza zvinyorwa, kuongorora uye epanyama marekodhi manejimendi masevhisi.
Tags: maitiro ebhizinesigore rekuchengetedza zvinyorwacmsZvemukati Services Platformcspdata analyticssoftware management softwaredmsgwaro rekuchengetedzaECMEnterprise Zvemukati Managementgrmnjere data kubatwamachine learningpepa gwaroshanduro yekuteveramafambiro ekufambisa
Maitiro eBlockchain Anowedzera Sei Shanduko muE-Commerce Indasitiri